Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Anguilla Travel News » Ny birao fizahan-tany Anguilla dia nanambara ny talen'ny fizahantany vaovao momba ny fizahantany
Ny birao fizahan-tany Anguilla dia mampiroborobo an-dRamatoa Shellya Rogers-Webster amin'ny toeran'ny talen'ny lefitry ny fizahantany
Shellya Rogers-Webster dia notendrena ho Tale lefitra misahana ny fizahan-tany vaovao an'ny birao fizahan-tany Anguilla
Ramatoa Rogers-Webster dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny fifandraisana anatiny sy ivelany any Anguilla Tourist Board
Shellya Rogers-Webster dia nanaporofo fa fananana sarobidy tokoa amin'ny Birao Mpizahatany Anguilla
Ny Filankevi-pitantanan'ny Birao Mpizahatany Anguilla (ATB) dia faly nanambara ny fanandratana an'i Ramatoa Shellya Rogers-Webster amin'ny toeran'ny Tale lefitra misahana ny fizahantany. Amin'ny asany vaovao, Ramatoa Rogers-Webster dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana sy fitantanana ny Birao mpizahatany any Anguillany fifandraisana anatiny sy ivelany ary ny fifandraisana, ao anatin'izany ny fitantanana ara-bola, ny loharanon'olombelona, ​​ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny fifandraisan'ny governemanta, ny politika ATB, ary ny famerenana amin'ny laoniny ny orinasa.
"Faly be aho mahita an-dRamatoa Shellya Rogers-Webster tafakatra amin'ny toeran'ny Tale lefitra misahana ny fizahan-tany," hoy ny Hon. Minisitry ny fizahan-tany, Andriamatoa Haydn Hughes. “Mitondra harem-pahalalana sy ambaratongan'ny matihanina izay mampiavaka ny Minisitera izy. Manantena ny hanohy hiara-miasa amin'i Ramatoa Rogers-Webster aho mandritra ny efa-taona sy tapany ho avy. ”
Talohan'ny nitondrany ny Tale lefitra misahana ny fizahan-tany Ramatoa Rogers-Webster dia mpitantana, Raharaham-bahiny ho an'ny Birao fizahan-tany Anguilla, toerana iray notananany hatramin'ny nanendrena azy ho masoivoho tamin'ny Jolay 2017.
"Shellya Rogers-Webster dia nanaporofo fa fananana sarobidy tokoa amin'ny Birao Mpizahatany Anguilla," hoy ny filohan'ny ATB Andriamatoa Kenroy Herbert. “Ny fahaizany mitantana mahatalanjona dia nanampy anay tamin'ny fitarihana ny fandaminana nandritra ny fotoan-tsarotra. Amin'ity fampiroboroboana mendrika azy ity dia eken'ny Birao ny anjara birikiny tamin'ny maso ivoho, ary matoky izahay fa mbola hanohy hihoatra ny andrasana amin'ny toerana vaovao izy. ”
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Birao Mpizahatany Anguilla, Ramatoa Roger-Webster dia niasa ho Senior Officer Officer, Kolontsaina ao amin'ny Departemantan'ny Tanora & Kolontsaina. Niampangana azy tamin'ny famolavolana, famolavolana ary fitantanana ireo programa fampandrosoana ny kolotsaina ao amin'ny departemanta izy, ary nanentana tamim-pahombiazana ireo loharanom-pahalalana ho an'ny daholobe, tsy miankina ary ny vondrom-piarahamonina mba hanamorana ny fitomboana sy ny fitohizan'ny fampandrosoana ara-javakanto sy kolontsaina any Anguilla. Ny fitiavany ny kanto sy ny faniriany hiara-hiasa amin'ny tanora dia natsangana tamin'ny andiany fiofanana niaraka tamin'ny British Museum any London, ny Edna Carlsten Arts Gallery ary ny Central Wisconsin Children's Museum ao Stevens Point, Wisconsin.
Ny marina any Mexico momba ny fahafatesan'ny COVID-19 dia sarotra atelina